Ingabe uyazi ukuthi yini orgasm? Ngisho eGrisi lasendulo wanika umqondo ocacile ukuthi izwi - ". Niyishise uthando" Kuleli zwe lanamuhla orgasm - kuyindlela uphumule futhi ujabule. Ake sihlolisise ngalesi sihloko.
Modern umqondo Sexology ocansini ukuqopha inqubo njengoba copulation ezincane kanye nokuqapha izinguquko bokuphila ukusabela ezingokwengqondo, okuncike zokuqala nezokugcina ubuhlobo phakathi nowesifazane. Esebenzisa umthelela ezintweni sokuzwa, olfactory nokubukwayo ukuqhanyelwa kwenzeka. In amadoda, kukhona disinhibition ka umgogodla ukwakhiwa isikhungo, okungukuthi, lapho kufika i ukwakhiwa wenduku. Ukuqhanyelwa kwabesifazane kuyinto ngokunamandla igagasi igazi ebeleni, lo wendlala kungase kwandise ngobukhulu, futhi izingono zakhe - qondisani. It kuzoba ukungezwani we clitoris kanye ezinkulu nezincane labia sikhukhumale. Kuphela ngemva kwemizuzwana embalwa iqala ukudedela izinhlelo kwegazi, kwemisipha futhi ethukile.
Orgasm engxenyeni enhle lwesintu ukunciphisa isimo Rhythmic kwezitho zobulili: kwesibeletho futhi esithweni sakho sangasese. emizweni Orgasmic ngesikhathi esifanayo kungaba ezihlukahlukene - kusukela komncane kuya postanyvaniya ecstasy enobudlova eziyaluzelayo. Amandla ezingeni emizweni enjalo kuncike ngokuqondile ezicini ezihlukahlukene: ukusetshenziswa zokuvimbela inzalo, isigaba se-umjikelezo wokuya esikhathini, ubunjalo nokuphathaphathana, wokuya ocansini kukammangali, ubudala, futhi-ke, umlingani.
Orgasm ezingabantu ingafinyelelwa kuphela esebenzisa ukukhuthazwa umthondo. Ngo abesifazane, njengoba ungabona, izinto kancane more xaka. Female - ihlukaniswe elixutshwe, lwesitho sangasese sowesifazane kanye clitoral.
Isikhathi sokusebenza orgasm - imizuzwana embalwa nje. Kungenzeka ukuthi phakathi eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Umuntu ongafinyelela iphuzu esiphezulu injabulo futhi ulahlekelwe ukwazi. umvuthwandaba Excellent kungaba futhi izinyembezi kanye uhleko. Orgasm kungenzeka kuhambisana nezinkulumo ekungabazeni izisusa zabanye, Eluma kanye ukulunywa.
Orgasm bungatholakala kuphela ezimweni ezimbalwa. Okokuqala, udinga ukuba oversexed, noma zondelelani umlingani wabo wonke engqamuzaneni elilodwa emzimbeni wakho. Okwesibili, ucansi, zama ukungacabangi lutho, nje uvula ibanga imizwelo eyakhayo. Udinga uphumule ngokuphelele, ukuze imisipha akuzona esishubile. Umuntu wesifazane kufanele bazi ukuthi hlobo orgasm azidingayo. Phela, abesifazane obanda kungenzeki, kukhona kuphela ukungaqondi nomlingani wakho. Ngakho-ke. abesifazane, ukuba ubuhlobo obuseduze, ukukhumbuza umlingani wakho ukuthi uncamela orgasm: clitoral, isitho sangasese somuntu wesifazane noma exubile. Ngakho, uzakwethu uzokwazi ukwanelisa isifiso sakho kweso nangokunembile. Kuyini orgasm ngoba indoda? It ayiphulule ipipi lakhe. Cishe bonke abantu njengezimvu blowjob blowjob nokuthi bakhetha onqenqemeni benjabulo yakhe. Into esemqoka ukuthi lokwaneliseka ngokobulili, ingafika ngokuvumelana nokuqonda mutual yibo bonke abalingani. Uma kukhona ukungavumelani phakathi kwakho badinga ingaxazululwa, kungenjalo ufune esikhundleni.
Ngaphezu kwalokho, umbuzo ukuthi orgasm, singasho ngokuqiniseka ukuthi lokhu nokuvulwa wonke umzimba, okuyinto eyenzeka ngemizuzwana. ososayensi American eziningi ngezilingo sezenziwe on imiphumela eqophelweni lokwaneliseka ngokobulili. Isinqumo ngishaqekile eziningi - kulapho ngokuvamile umuntu orgasm, siyaqina, mzimba wakhe. Akufanele sibakhohlwe ukuthi ubulili buhlangene ngani orgasms - amabili ingxenye yokuphila enempilo futhi eside. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi sizame beyinake ngokugcwele izinzuzo zakho zezempilo.
Ngithemba lesi sihloko kuye kwangisiza ukuba uthole impendulo yombuzo othi "Yini orgasm 'zenzeke ekuphileni kwethu.
Indlela vusa umyeni wakhe babehlala ndawonye iminyaka eminingi?
Isikhala esiyimbangela: Inguqulo emabintana ngokuvakashela nezithombe eziqoshiwe edume kunazo ezinqunu
Yini amadoda ufuna kusuka abesifazane: ngifuna izimpendulo
Ama-Akhawunti ekhokhwayo futhi yayo imithetho bhala-off